Patreon ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အချက်အလက်များ အွန်လိုင်းတွင် ပေါက်ကြားခဲ့ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home နည်းပညာသတင်း Patreon ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အချက်အလက်များ အွန်လိုင်းတွင် ပေါက်ကြားခဲ့
Patreon ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အချက်အလက်များ အွန်လိုင်းတွင် ပေါက်ကြားခဲ့
Thiha Htike at 8:14:00 PM နည်းပညာသတင်း,
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ အခြေစိုက် Patreon ဝက်ဘ်ဆိုက် တိုက်ခိုက်ခံရအပြီး 15 gigabytes ခန့်ရှိ အချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Patreon သည် အနုပညာရှင်များက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားသည့် အနုပညာလက်ရာ သို့မဟုတ် ပညာဖြင့် ရံပုံငွေရှာဖွေနိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ Patreon ကို တေးဂီတပညာရှင် ဂျက်ကွန်တီနှင့် developer ဆမ်ရမ်တို့က ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Patreon ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ငွေကြေးလှူဒါန်းသူ ၂,၃၃၀,၃၈၂ ၏ တစ်ကိုယ်ရေ အချက်အလက်များမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်၌ အွန်လိုင်းတွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အကြွေးဝယ်ကတ် အသေးစိတ် အချက်အလက်များမှာ ခိုးယူခြင်းမခံခဲ့ရ ကြောင်း အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဂျက်ကွန်တီက ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဆာဗာမှာ အကြွေးဝယ်ကတ်နံပါတ် အပြည့်အစုံကို မသိမ်းဆည်းမထားပါဘူး။ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ အချက်အလက်မှာ အကြွေးဝယ်ကတ်တွေ မပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သုံးစွဲသူရဲ့ လူမှုလုံခြုံရေး နံပါတ်၊ အခွန်ဆောင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ password အားလုံးကိုလည်း encrypt ပြုလုပ်ပြီး လုံလုံခြုံခြုံ ရှိနေပါတယ်” ဟု ကွန်တီက ပြောကြားခဲ့သည်။
Patreon ၏ password များကို encrypt မပြုလုပ်ခဲ့ဘဲ သိမ်းထားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ် login အချက်အလက် အသေးစိတ်များ ပြောင်းလဲထားသင့်ကြောင်း ကွန်တီက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း Patreon ၏ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များအရ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လစဉ်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုသူ ၁၆ သန်းရှိကြောင်း သိရသည်။ Patreon သည် ဝက်ဘ်ဆိုက် “debug” ဗားရှင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွင်း အချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
My Facebook Account Click
"ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆီမီးထွန်းမလဲ..???? "
တညင်းသီးသည် စားစရာ မဟုတ်ပါ
Samsung ဖုန်းများအတွက် Full File FIrmware ( Repair...
ရေနွေးငွေ့ကြောင့် ဖုန်း LCD ကို ထိခိုက်နိုင်
OPPO မြန်မာ Color OS Downloader.bat
Driver Backup and Restore.exe for Window7/ 8 and 10
7298D တွေ FIRMWARE ရေးပြီးသွားရင် FACTORY MODE ထဲေ...
MEC အချင်းချင်း ငွေလွှဲလို့ရပြီ
C+G HANDEST ကို G+G (G နှစ်ကဒ်ထိုးဖြစ်အောင်လုပ်နည်း)
MEI INVALID ,NO SERVICE,NO CALL ,BASEBAND FIX SOLU...
HUAWEI BOOTLOADER CODE အမြန်တောင်ချင်သူများအတွက် ၁...
WIFI ဆိုတာဘာလဲ ???????
G, E, 3G, H, H+, 4G, LTE ဆိုတာ ဘာလဲ .?
Easy Selfie Free For Window Phone
BeeTalk ၏ Public Account အား လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်...
Android 5.1 Google Acc verification ByPass
Update ဖြစ်တဲ့ S6 Edge Plus ထဲက Samsung Keyboard
OPPO R7 Lite, R7 Plus များကို Root လုပ်နည်း ကွန်ပျ...
Android Version 6.0 Marshmallow ကို မြှင့်တင်နိုင်...
Sony Ph အမျိုးအစာ 64 မျိုးကို Lock Remove လုပ်ပေးတ...
Huawei firmware update.app Exractor
Dictionary For Window Phone
၂၁.၅ လက်မ 4K iMac သစ်ကို လာမည့် ရက်သတ္တပတ်တွင် မိတ်...
သာမန်လက်တော့ပ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့် Surfac...
Windows 10 Mobile ကို ကွန်ပျူတာအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံ...
Township For Window Phone
သုံးနှစ်တာကာလ အတွင်း ITPEC စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူ နှစ်ေ...
Patreon ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အချက်အလက်များ အွန်လိုင်းတွင်ေ...
အလိုအလျောက် မောင်းနှင်နိုင်သည့် ထရပ်ကားကို Daimler...
မနက် အိပ်ယာထတာနဲ့ ဒါတွေ မမေ့နဲ့
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် နှင့် ဂုဏ်တော်ကွန်ခြာ Download